အမိမြေကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ မအေးသောင်းပုံရိပ်…. - Zeekwat Hot News
အမိမြေကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ မအေးသောင်းပုံရိပ်….
July 12, 2019096
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မအေးသောင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေပ အဇာဘိုင်ဂျန်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၄၃ ကြိမ်မြောက် ယူနက်စကိုအစည်း အဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေ တန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပုဂံကတော့ အခုဆို ရင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်သွားခဲ့ပါပြီ။မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် တော့ ပျော်စရာ သတင်းကောင်းကို ဆောင် ကြဉ်း ပေးခဲ့တဲ့ မအေးသောင်းကတော့ အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။
မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ မုန့်ဟင်းခါးအရင် စားဖြစ်တယ်၊အခုတော့ အလွမ်း တွေ ပြေသွား ပါပြီလို့ မအေးသောင်းက အခုလို ပြောထားပါတယ်။
အလွမ်းလည်းပြေသွားပါပြီ….” ဆိုပြီး တင်ထားပါတယ်။ ယူနက်စကိုအစည်း အဝေးတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ မှေတ်တမ်းပုံတွေကို သူမရဲ့ အကောင့်မှာ တောက်လျောက်တင် ထားပါတယ်။မအေးသောင်းကတေ့ာ ဘာကုမြို့ကိုလည်း လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။အမိုက်စားပုံလေးတွေကိုလည်း ရိုက်ကူး ခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတတြှရေဲ့ အခစွတြော မအေးသောငြးကတော့ ပှီးခဲ့တဲ့ ရကတြှပေ အဇာဘိုငဂြနွမြှာ ကငြွးပတဲ့ ၄၃ ကှိမမြှောကြ ယူနကစြကိုအစညြး အဝေးကို တကရြောကခြဲ့ပါတယြ။မှနမြာလူမွိုးတှေ တနဖြိုးထားခစွမြှတနြိုးတဲ့ ပုဂံကတော့ အခုဆို ရငြ ကမျဘာ့အမှအနှေစစြာရငြးဝငသြှားခဲ့ပါပှီ။မှနမြာပှညသြူတှေ အတှကြ တော့ ပွောစြရာ သတငြးကောငြးကို ဆောငြ ကှဉြး ပေးခဲ့တဲ့ မအေးသောငြးကတော့ အခုဆိုရငြ မှနမြာပှညကြို ပှနလြာခဲ့ပါပှီ။
မှနမြာပှညကြို ပှနရြောကလြာတဲ့ အခွိနမြှာ မုနြ့ဟငြးခါးအရငြ စားဖှစတြယြ၊အခုတော့ အလှမြး တှေ ပှသှေား ပါပှီလို့ မအေးသောငြးက အခုလို ပှောထားပါတယြ။
အလှမြးလညြးပှသှေားပါပှီ….” ဆိုပှီး တငထြားပါတယြ။ ယူနကစြကိုအစညြး အဝေးတကရြောကဖြှစတြဲ့ မှတတြေမြးပုံတှကေို သူမရဲ့ အကောငြ့မှာ တောကလြွောကတြငြ ထားပါတယြ။မအေးသောငြးကတေ့ာ ဘာကုမှို့ကိုလညြး လညပြတခြဲ့ပါတယြ။အမိုကစြားပုံလေးတှကေိုလညြး ရိုကကြူး ခဲ့ပါတယြ။
Mikis Weber ကချစ်သူရဲ့ အလှဆုံးဓါတ်ပုံလေးနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်….